Naheno zavatra marobe izahay mikasika ny Microsoft Dynamics AX, izay efa novinavina izay AX7. AX7 dia mbola manangona ny ampahany amin'ny fanovana taloha, misy zavatra vaovao mahavariana momba ny AX7 Development izay tokony ho fantatrao.
Ao amin'ny AX7 amin'izao fotoana izao dia tsy manana asa ara-moraly MorphX / AX Development intsony isika. Fa ho an'ny fampandrosoana AX dia nanome antsika Visual Studio amin'izao fotoana izao i Microsoft.
AX7 dia miankina amin'ny teny roa mifanaraka:
Ny singa: Ny singa dia zavatra mitoetra ao amin'ny AOT. Ohatra ny fanondroana fototra, EDT, latabatra sy ny sisa.
Asehoy: Modely iray dia fanangonana ny singa, izay ananantsika koa amin'ny endriny efa taloha.
Firaketana: Ampahany kely azo ampiasaina ny bundle, izay mety manana Models samihafa.
Manitatra: Ny tetikasa dia ny efitrano mifanaraka amin'ny zava-drehetra izay andrasana hanorina ny fampiharana.
Amin'ny fampidirana ny AX7, ankehitriny dia afaka manatontosa fampandrosoana amin'ny AX izahay amin'ny fampiasana paikady roa:
lohany dia nopetahany takela
Ny fanesoana dia midika fa raha manova ny singa ao amin'ny tara ambony ianao, dia hanova ny famaritana azy, amin'ny faribolana ambany. Izany no zavatra nataontsika hatramin'ny AX2012 hanovana ny AX. Izy io dia mamela ny fampifanarahana ny metadata sy ny loharanom-baovafana amin'ny ambaratonga ambony.
Izany dia mihevitra ny hanatsarana ny singa efa misy, tsy manala ireo izay hita any amin'ny planina samihafa. Midika izany fa tsy hohavaozina ny singa, fa ny ampahany dia hivoatra. Amin'ny famokarana ireo singa mitrandraka, ny ankamaroan'ny fanatontosana sy ny code dia apetraka amin'ny fifamatorana samihafa. Ahitana ny fehezan-dalàna nampidirina na novaina tao amin'ny rakitsoratry ny fampitomboana.
Alohan'ny hiasa ao amin'ny Visual Studio dia tsy maintsy manao paikady roa isika izay hampivelatra ny fandraisana anjara amin'ny AX.
Dingana 1: - Mandehana any amin'ny AX 7 Options
Dingana 2: - Fidio ny safidy
Dingana 3: - Mametraka safidy momba ny fanoratana ny lahatsoratra
Dingana 4: - Mametraka Safidy Best Practice
Matokia fa mahatonga ny traikefanao momba ny fivoaran'ny MS AX7 vao mainka mahafa-po. Ny fahazoana an-dàlam-pandrosoana an'ny Microsoft Dynamics AX7 avy amin'i Koenig dia hahafantatra anao amin'ny endriny maro hafa mety ho azonao ary ny universe vaovao vaovao mety tsy hoeritreretinao mihitsy.
Get Microsoft Dynamics 365 Training & Certification in Just 5 Days